Description:Famolavolana habe lehibe telo-habe, mety amin'ny saka sy alika lehibe. Ny varavarankely an-kalamanjana lehibe + lavaka misy rivotra ao an-tampony dia manome traikefa mamelombelona amin'ny biby fiompy amin'ny fahavaratra. Volavola azo ampiharina azo zahana, fitehirizana toerana ary mora entina. Drafitra fanoherana avo roa heny, zipper manohitra fanokafana + fehin-kibo fanamafisana Ny famolavolana fanitsiana maromaro dia mahatonga azy io ho mendrika sy miorim-paka ao aoriana, ary ny fehin-tsoroka ambony dia azo ahitsy, manamora ny fitondrana azy. Famolavolana manerantany amin'ny vanim-potoana efatra, fampiasana maodely roa ary fampiasana maro hafa an'ny shutter roller. Teboka adin-tsaina dimy, teboka adin-tsaina dimy mifandanja amin'ny andilana, soroka, tratra, lamosina ary vodiny, mampihena ny tsindry fiterahana. Akorandriaka vita amin'ny plastika vita pirinty, azafady ny aizina, hazavana eo noho eo, avelao ny saka hijery an'izao tontolo izao ary hahatsapa ho azo antoka kokoa. Ny habaka lehibe dia mamela ny biby fiompy hihodina sy ho afaka.
Previous: Lion Little Ears Wig Dog Hat Pet Wig nivadika ho Hat Topi-tsatroka Headgear saka
Manaraka: Akanjo alika alika kely vavy Teddy Bichon Pomeranian Schnauzer Kavina farihy efatra sy tongotra palitao matevina kely
Akanjo soamaso lehibe an'ny alikaola Golden Retriever Lab ...